October 16, 2020 - Online Hartha
နနေံ့မတညျ့တဲ့ ဇနီးမောငျနှံ တှအေတှကျ အိမျထောငျရေး၊စီးပှားရေး အဆငျပွစေဖေို့ဒီနညျးလမျးအတိုငျး လုပျလိုကျပါ…
“မငျးလေးပါးဆုံ ရှတေိဂုံကိနျးကမြညျ” ဆိုသော တဘောငျ၏ အဓိပ်ပါယျ…
ဖတျကွညျ့လိုကျပါ…သငျမသိသေးတဲ့ ဗဟုသုတတှေ တအံ့တဩ သိစရေမယျ
ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ သင်မသိသေးတာတွေ တအံ့တဩ သိစေရမယ်… ( ၁ ) – သင့်လည်ချောင်းထဲမှာ ယားနေတယ်ဆိုရင် …. နားရွက် ကို ကုတ်လိုက်ပါ နားရွက်မှာ. ရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေ ကို လူံဆော်မိတဲ့ အခါအဲဒီ အာရုံကြောတွေဟာ လည်ချောင်းထဲက အာရုံကြောတွေကို အလိုအလျှောက်တုန့်ပြန်စေပြီး ယားယံမူ ကို ပျောက်ကင်းလိမ့်မယ်။ ( ၂ ) – လူတွေ ဆူညံ့နေတဲ့ နေရာ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းပြောတဲ့နေရာ တယောက်ယောက်ရဲ့အသံကို မကြားနိုင် ဖြစ်နေလား.. ရုတ်ချည်း ပြောလိုက်တဲ့ အသံကို ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ညာဖက်နား ကို အသုံးပြုပါ ဂီတ သံစဉ်တွေ ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်နား ကို အသုံးပြုပါ။ ( … Read more
အသားအရေ ဂရုစိုကျသူမြား အားလုံး သိထားသငျ့ တဲ့ ဝကျခွံ အမြိုးအစားမြားနဲ့ ထိနျးသိမျး ကုသနညျးမြား
အားလုံး သိထားသင့် တဲ့ ဝက်ခြံ အမျိုး အစားနဲ့ ကုသ နည်း များ (တန်ဖိုး ရှိတယ်) ဝက်ခြံတွေဆိုတာကလည်းလေ။ ဒီတိုင်းနေနေရင် အကောင်း။ သွားစရာ၊ လာစရာရှိပြီး။ အရေးကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ရပြီဆိုတာနဲ့ ဟိုတစ်မျိုး၊ ဒီတစ်မျိုးလှိမ့်ထွက်လာကြတော့တာပါပဲ။ တစ်ချို့ကျတော့ လည်း နှစ်ရည် လများပေါက်နေ တတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲပေါက်ပေါက် ဝက်ခြံတွေက အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိပြီး ကုသပုံချင်း မတူညီကြပါဘူး။ ၁။ ဆားဝက်ခြံ ဆားဝက်ခြံ မှာ အမဲစေ့နဲ့ အဖြူစေ့ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဆီ၊ ဖုန်မှုန့်၊ အညစ်အကြေးနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ စုပုံလာပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်သွားတဲ့အခါမှာ ဆဲလ်သစ်တွေပြန်မမွေးဖွားနိုင်တော့ဘဲ ဆားဝက်ခြံဖြစ်လာရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပုံမှန်ပေါင်းတင်ပေးမယ်။ Exfoliate ပုံမှန် လုပ်ပေးမယ်။ မိတ်ကပ် နေ့စဉ်ပုံမှန်ဖျက်ပေး မယ်။ ချွေးပေါက်တွေ … Read more
ငုံးဥ ရဲ့ကနျြးမာရေး ကောငျးကြိုးမြား နှငျ့ တှဲဖကျပွီး မစားသငျ့သော အစားစာမြား
ငုံးဥကိုတော့ မသိတဲ့ လူဆိုတာ ရှားပါတယ်။ဒါပေမယ့် ငုံးဥထဲမှာ ဆိုရင် ဘယ်လို အာဟာရများစွာ ပါဝင်တာကိုတော့ သိတဲ့သူ ရှားပါးပါလိမ့်မယ်။ ငုံးဥထဲမှာ ပါတဲ့ အာဟာရ တန်းဖိုးဟာ ဆိုရင် ကြက်ဥ နှစ်လုံးစာနဲ့ ညီမျှတယ် ဆိုတာကော သိကြ ပါသလား။ ငုံးဥဟာ လူ့ရဲ့ အဆုတ်နဲ့ သရက်ရွက်ကို အားကောင်း စေပါတယ်။ ငုံးဥကို စားသုံးသင့်တဲ့ သူတွေကတော့ ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ သွေးအားနည်းတဲ့ သူတွေ၊ ချူချာတဲ့သူနဲ့ မီးဖွားပြီး ခါစ မိခင်လောင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက် သွေးကြော ရှိတဲ့ သူတွေကတော့ ငုံးဥကို ပမာဏများစွာ မစားသင့်ပါဘူး။ ငုံးဥမှာ ပရိုတင်း၊အဆီ၊သံဓာတ် လက်စီသင် (Lecithin)၊ vitamin-A ၊ vitamin-B1 ၊ … Read more
ဗိုက်ကြောပြတ် ပေါင်ကြောပြတ်ပီး အသားအရည်တွန့်နေတာတွေ အတွက် ဆေးစွမ်း ကောင်းတစ်လက်…
ဗိုက်ကြောပြတ် ပေါင်ကြောပြတ်ပီး အသားအရည်တွန့်နေတာတွေအတွက် ဆေးကောင်းတလက် ကိုယ်တိုင်အရင်ကပေါင်ကြောပြတ်ဖူးလို့အိမ်မှာလုပ်ပီးအသုံးပြုနေတာနှစ်နဲ့ချီနေပါပီနော်း တကယ်လည်းကောင်းလို့ပြန်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ ပိုက်ဆံမကုန်ပဲထိရောက်တဲ့ဆေးလေးပါ။ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ပဲဗိုက်ကြောပြတ်ပြတ် / ဝလာလို့ပဲပေါင်ကြောပြတ်ပြတ် ဘယ်လိုအကြောင်းရာကြောင့်ပေါင်ကြောပြတ်ပြတ် ဆေးကောင်းရှိပါတယ်နော်း လုပ်ရတာလည်းမခက်ပဲအရမ်းကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်အပင်ကြီးက အနှစ်တုံး ငါးခုခြောက်ခုခန့်နဲ့အုန်းဆီစစ်စစ် သံပုရာအနည်းငယ်ပဲလိုတာပါနော်း အုန်းဆီက M150 ပုလင်း တစ်ပုလင်းခွဲးလိုပါတယ်။သံအိုးတစ်ခုထဲမှာ ရှားစောင်းအနှစ်ချည်းထည့်ပါ အုန်းဆီလောင်းထည့်ပါ အ့ဒီအိုးကိုမီးဖိုပေါ်တင်ပီး မီးခပ်အေးအေးလေးနဲ့သာပေးဆူထားပါ မိနစ်30ခန့်တည်ပီး ရှားစောင်းတွေမဲးတဲ့ထိတည်ပီး မီးဖိုပေါ်မှချကာ ရှားစောင်းအမဲးတွေကိုဖယ်ပါ ဆီရည်တွေကို ဖန်ဘူးတစ်ခုတည်းလောင်းထည့်ထားပါ။ အကြေားပြတ်တဲ့နေရာတွေကို ထိုဆီရေဖြင့် အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်မှ နှစ်ကြိမ်လိမ်းပေးသွားရင်သိသိသာသာတစ်ပတ်အတွင်းလျော့လာမှာပါ။ ဂျွတ်တတ်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့အမာရွတ်နေရာတွေကို သံပုရာရည်အနည်းငယ်ရောစပ်ကာလိမ်းပေးနိုင်တယ်နော်း နှစ်ပတ်အတွင်းလျော့သွားမှာပါ။ ညအိပ့်ခါနီးတိုင်းBodyအနှံ့လိမ်းပေးသွားရင်လည်းစိုပြေဝင်းလက်တင်းရင်းတဲ့အသားအရည်ကိုရစေမှာပါနော်း။ကျမ်းမာလှပကြပါစေနော်း မြန်မာဆေးစွမ်းကောင်းများ Unicode ဗိုကျကွောပွတျ ပေါငျကွောပွတျပီး အသားအရညျတှနျ့နတောတှအေတှကျ ဆေးကောငျးတလကျ ကိုယျတိုငျအရငျကပေါငျကွောပွတျဖူးလို့အိမျမှာလုပျပီးအသုံးပွုနတောနှဈနဲ့ခြီနပေါပီနျေား တကယျလညျးကောငျးလို့ပွနျမြှဝပေေးလိုကျတာပါ ပိုကျဆံမကုနျပဲထိရောကျတဲ့ဆေးလေးပါ။ကိုယျဝနျဆောငျလို့ပဲဗိုကျကွောပွတျပွတျ / ဝလာလို့ပဲပေါငျကွောပွတျပွတျ ဘယျလိုအကွောငျးရာကွောငျ့ပေါငျကွောပွတျပွတျ ဆေးကောငျးရှိပါတယျနျေား လုပျရတာလညျးမခကျပဲအရမျးကိုလှယျကူရိုးရှငျးပါတယျ။ ရှားစောငျးလကျပတျအပငျကွီးက အနှဈတုံး … Read more
လူအမြားစု သတိမမူမိကွတဲ့ တံမွကျစညျးနိမိတျမြား အကွောငျး
လူအများစု သတိမမူမိကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်များ အကြောင်း ၁။ အပျိုတွေ တံမြက်စည်း ကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက် ကြီးတတ်ပါတယ်။ ၂။ အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ ၃။ အိမ်နီး ခြံနီးချင်းတွေ ကိုယ့် အိမ်/ခြံဝကစပြီး တံမြက်စည်း လာလှည်းသွားရင် ၀င်မယ့်လာဘ် မ၀င်တော့ပါဘူး။ သူ့အိမ်‌၀က ပြန်လိုက်လှည်းယူပါ။ ၄။ တံမြက်စည်းသစ်နဲ့ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် စ မလှည်းရပါဘူး။ ပစ္စည်းတစ်ခုခု အိမ်ဝချပြီး အိမ်ထဲ အရင်လှည်းထည့်ရပါတယ်။ ၅။ ကိုယ့်မိသားစုတွေအကုန် ကံဆိုး‌နေတယ်ထင်ရင် ရှေ့၊ နောက် အိမ်တံခါး‌တွေဖွင့်ထားပြီး အိမ်ရှိလူကုန် အိမ်လယ်ကစ ရှေ့‌နောက်အ‌ပေါက်ဘက်ကို တံမြက်စည်း လှည်းခိုင်းပါ။ ၆။ … Read more
အကျပ်အတည်း များလာတဲ့အခါ၊ စီးပွားလာဘ်လာဘ လိုအပ်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံး အစွမ်းရှိ ယတြာပြုလုပ်နည်း
အကျပ်အတည်းများလာတဲ့အခါ၊စီးပွားလာဘ်လာဘ လိုအပ်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံး ယတြာပြုလုပ်နည်း ပွဲတွေ့ယတြာမီးထွန်းနည်း(ဂါထာမီးထွန်းနည်း) ဒီလို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ သေသေချာချာ အစွမ်းရှိ စီရင်နည်းတွေကို တင်ပေးဖို့ တာဆူခဲ့တာကြာပါပြီ။ တင်မယ့်တင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပေးချင်တာကြောင့် အချိန်တစ်ခုထိ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။ ဒါက အင်းကွက် စမကွက်မဟုတ်ပါဖူး။ဒါကြောင့် ရေးသားစဉ် တင်းကြပ်တဲ့ စည်းစနစ်တွေ မလိုအပ်ပဲ လူတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူ စီရင်အကျိုးပြီးနိုင်ပါတယ်။ အဓိက အနေနဲ့ကတော့ …. (၁)အကြတ်အတည်းများတဲ့အခါ (၂)ဂြိုလ်အစီးအနင်းညံတဲ့အခါ (၃)စီးပွားလာဘ်လာဘ လိုအပ်တဲ့အခါ (၄)အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယတြာခြေတိုင်း အစွမ်းမထက်ဖြစ်တဲ့ခါ … စတဲ့ အခြေအနေ (၄)မျိုးအတွက်ရည်ရွယ် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ စီရင်နည်း သန့်ပြန့်တဲ့ စက္ကူအပေါ်မှာ ပုံပါအတိုင်း ရေးသားရမှာပါ။ရေးတဲ့အခါ မနက်ပိုင်း ဘုရားရှေ့မှာ ရေးသားရပါမယ်။ ရေးနေစဉ် စကားမပြောမိဖို့နဲ့ ခေါ်ရင်မထူးဖို့နဲ့ ရေးသားမူကိုပဲ အာရုံစိုက်နေပါမယ်။ ပုံပါအတိုင်း … Read more
သှားကိုကျ ဝဒေနာအတှကျ တကယျထိရောကျပွီး ဘေးထှကျဆိုးကြိုး လုံးဝ မရှိတဲ့ သဘာဝဆေးနညျး
သွားကိုက်ဝေဒနာအတွက် တကယ်ထိရောက်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်း သွားကိုက်ဝေဒနာဆိုရင် ယောက်ျားတွေတောင် ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ပါဘူး။ သွားကိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအပထား၊ အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းရှာဖို့က အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး မှီခိုအားထားကြပေမယ့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသိပ်များလွန်းတာက တကယ်တော့ ကိုယ်ခံအား ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိတဲ့ သဘာဝအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနည်းတွေကို ညွန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ကြက်သွန်နီ ပဋိဇီဝအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ကြက်သွန်နီကို သွားကိုက်ဝေဒနာကုသရာမှာ အသုံးပြု အကြံပြုထားပါတယ်။ နာကျင်ကိုက်ခဲမှု လျော့နည်းသက်သာအောင် ကြက်သွန်ဖြူ ၁မွှာ၊ ၂မွှာ ကိုက်ပါ ဒါမှမဟုတ် ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်အနည်းငယ်နဲ့ ဆားရောစပ်ပြီး ကိုက်ခဲတဲ့သွားပေါ် လိမ်းပေးပါ။ ဝေဒနာပျောက်ကင်းစေဖို့ အာမခံပါတယ်။ ၂။ ပူစီနံတီး ပူစီနံတီးက ခံတွင်းအတွက်သာ ကောင်းတာမဟုတ်ဘဲ သွားကိုက်ဝေဒနာပါ သက်သာစေပါတယ်။ ရေနွေးခွက်ထဲ ပူစီနံရွက်ခြောက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း … Read more